အ​ကြောင်းအရင်းအမျိုးမျိုး​ကြောင့် အနုပညာနာမည်ကို ​ပြောင်းလဲခဲ့တဲ့ K-Pop Idol (၇) ဦး | Asia News Bar
အနုပညာနာမည်ကို ​ရွေးချယ်ရတာဟာ Idol ​တွေအတွက် အကြီးမားဆုံး အခက်အခဲတစ်ခုပါပဲ။ တချို့​​ Idol တွေက​တော့ မူလအနုပညာနာမည်နဲ့ပဲ ​​အောင်မြင်​ကျော်ကြားသွားသလို တချို့က​တော့ သူတို့နဲ့ လိုက်ဖက်မှုမရှိ​တာ​ကြောင့်​ရော တခြားအ​ကြောင်း​​ကြောင့်ပါ အနုပညာနာမည်ကို ​ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။ ယခု​ဖော်ပြ​ပေးသွားမယ့် Idol ​တွေက​တော့ သူတို့ရဲ့ အကျင့်စရိုက်နဲ့ အရည်အချင်းကို ထင်သာမြင်သာရှိ​​အောင်လို့ အနုပညာနာမည်​တွေကို ​ပြောင်းလဲခဲ့ကြပါတယ်။
RM ဟာ သင်တန်းသားဘဝတုန်းက Rap Monster ဆိုတဲ့ နာမည်ကို အနုပညာနာမည်အဖြစ် ​ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့အ​နေနဲ့ ဒီနာမည်က ဆန်းပြီး မိုက်တယ်လို့ ထင်​ပေမဲ့ သူနဲ့ ဆက်နွယ်မှု သိပ်မရှိသလိုခံစားရတဲ့အတွကိ ၂၀၁၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလမှာ RM ဆိုပြီး အနုပညာနာမည်ကို ​ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။ ဒီနာမည်က သူနဲ့ သူ့ရဲ့ဂီတကို ကိုယ်စားပြုတယ်လို့ ပိုပြီးခံစားတဲ့အတွက် ​ပြောင်းလဲခဲ့တာပါ။
၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာ PENTAGON အဖွဲ့နဲ့ ပွဲဦးထွက်ချိန်ကစလို့ ​Hui, HyunA တို့နဲ့အတူ Triple H အဖွဲ့အဖြစ် အနုပညာလှုပ်ရှားမှု​တွေ ပြုလုပ်ခဲ့ချိန်အထိ Dawn ဟာ E’Dawn ဆိုတဲ့ နာမည်ကို အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာ အဖွဲ့ထဲက​ရော ​အေဂျင်စီကပါ နုတ်ထွက်ပြီး​ P Nation နဲ့ စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီး​နောက် ထိုနှစ်ကုန်​လောက်မှာပဲ Dawn ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ ပွဲဦးပြန်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။
Jinyoung က​တော့ ၂၀၁၂ ခုနှစ် JJ Project အဖွဲ့နဲ့ ပွဲဦးထွက်ချိန်မှာ JYP Entertainment ရဲ့ တည်​ထောင်သူ Park Jinyoung နဲ့ မမှား​စေဖို့အတွက် JR ဆိုတဲ့ အမည်ကို သုံးစွဲခဲ့ပါတယ်။ ဒါ​ပေမဲ့ ပရိသတ်​တွေက သူ့ရဲ့နာမည်ကို ဘယ်လိုအသံထွက်ရမလဲ ​သေချာမသိတာ​ကြောင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ Junior ဆိုပြီး ​ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာ​တော့ သူ့ရဲ့ အမည်ရင်းဖြစ်တဲ့ Jinyoung ဆိုတဲ့ နာမည်ကိုပဲ အနုပညာနာမည်အဖြစ်ထားဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
4. Kwon Eunbi (IZ*ONE အဖွဲ့ဝင်​ဟောင်း)
IZ*ONE အဖွဲ့ဝင်မဖြစ်ခင်မှာ Eunbi ဟာ Ye-A ဆိုတဲ့ မိန်းက​လေးအဖွဲ့ရဲ့ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခဲ့ပြီး Kazoo ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှု​တွေ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုအဖွဲ့က​နေ နုတ်ထွက်ပြီး​နောက် သူမရဲ့ အမည်ရင်းကိုပဲ ပြန်လည်အသုံးပြုကာ ‘Produce 48’ အစီအစဉ်တစ်​လျှောက်လုံး​ရော IZ*ONE အဖွဲ့နဲ့ လှုပ်ရှားမှု​တွေ ပြုလုပ်စဉ်မှာ​ရော Eunbi ဆိုတဲ့ နာမည်ကိုပဲ အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။
5. Kyulkyung (I.O.I နဲ့ PRISTIN အဖွဲ့ဝင်​ဟောင်း)
Kyulkyung,အမည်ရင်း Zhou Jieqiong ဟာ ‘Produce 101’ ပြိုင်ပွဲမှာ ပရိသတ်​တွေ ​ခေါ်ဆိုရလွယ်ကူ​အောင် Pinky ဆိုတဲ့ အနုပညာအမည်ကို အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ ထို့​နောက် သူမရဲ့ တရုတ်မျိုးရိုးဖြစ်တဲ့ Zhou ဆိုတဲ့ အမည်ကိုလည်း ခဏအသုံးပြုခဲ့ပြီး ​နောက်ပိုင်း Pristin နဲ့ I.O.I အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာတဲ့အခါ Kyulkyung ဆိုတဲ့ ကိုရီးယားအမည်ကို အနုပညာအမည်အဖြစ် ​ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။
MONSTA X အဖွဲ့ဝင် Joohoney က​တော့ ၂၀၁၄ ခုနှစ် K-Pop ​လောကထဲကို စတင်ဝင်​ရောက်တည်းက သူ့ရဲ့ အမည်ရင်းဖြစ်တဲ့ Jooheon အမည်နဲ့ပဲ အနုပညာလှုပ်ရှားမှု​တွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်​ရောက်မှသာ MONSTA X အဖွဲ့ရဲ့ အင်္ဂလိပ် ပရိုမိုးရှင်း​တွေအတွက် ​ခေါ်ဆိုရလွယ်ကူ​​အောင် အနုပညာနာမည်ကို Joohoney လို့ ​ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။
WINNER အဖွဲ့ဝင် Mino က​တော့ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာ BoM ဆိုတဲ့ ballad အဖွဲ့နဲ့ ပွဲဦးထွက်ခဲ့ပြီး အနုပညာနာမည်ကို Tagoon လို့ မှည့်​ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ YG Entertainment နဲ့ စာချုပ်ချုပ်ပြီး​နောက် သူ့ရဲ့ အမည်ရင်း Minho နဲ့ အနည်းငယ်ကွဲတဲ့ Mino ဆိုတဲ့ နာမည်ကိုပဲ အသုံးပြုဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
Next Solo album အတွက် Lisa ရော LA ရောက်နေတာလားဆိုပြီး Fan တွေက ခန့်မှန်းနေကြ »
Previous « ညွှန်ကြားရေးမှူး Koo Chang-Hwan ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ July လအတွက် Female Brand Reputation Rank
ကိုယ့်ရဲ့ Boyfriend အဖြစ် K netizen တွေ စိတ်ကူးယဉ် အလိုချင်ဆုံး Kpop idol များ
BLACKPINK ဆိုတဲ့နာမည်ကိုကြားလိုက်မိတိုင်း GOT7’s ရဲ့ Jay B က ဘယ်လိုခံစားရသလဲ
ARMY တို့အတွက် BTS အဖွဲ့ဝင်တွေ ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ အကြိုက်ဆုံး BTS Music Video (၇) ပုဒ်